မင်္ဂလာပါအဲဒီမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Mozzoloh! သင်အွန်လိုင်းကစားတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းမီ၊သင်ရှိသည်ဖို့သွားကြသည်အတိပေါက်ကွဲမှုမှာအမှတ်အကျွန်ုပ်တို့စကား! သေချာတယ်အသောက်သွားဖို့အဆင်သင့်၊အချို့သောတစ်ရှူးအသုံးနဲ့ဆိုရင်တကယ်ခံစားနေရလို့ခေါ်အစည်းအဝေးတက်ဖို့ ၁၁၊လိုက်ခြင်းဖြင့်တစ်အိုးအုန်းသီးရေနံ! ဒီဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်အလွန်ကြီးဂိမ်းတစ်ခုအခြေခံလိင်–အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့ယုံကြည်သောပေါင်းစပ်အလွန်ကောင်းစွာ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အဘယ်သို့ပြုကြပါဘူး? လိင်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊မှန်သော? ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်မနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးအဆုံးစွန်ညမ်းဂိမ်းစွန့်စားမှု!, ခဲ့ကြောင်းတရားခံအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်ဝေ Mozzoloh၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်သည်တစ်လျှောက်လာမယ့်နေ့နှင့်အလှူကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုကျော်ရှာဖွေနေ။ မှတ်ချက်စံချိန်တင်များအတွက်အဲဒီအလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်:သင်ပြုလိုအပ်သမျှအဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအကောင့်တစ်ခုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်တစ်သက်တာသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြာမပါဘဲဂိမ်းအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိခြင်းကြောင့်။ ကျနော်တို့ထောက်ခံလုံးဝမှတဆင့် microtransactions နေစဉ်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းအတော်လေးအရေးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေသားစီးဆင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၊သင်သည်ဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ချင်ကြပါဘူး!, အဆိုပါရွေးချယ်မှုသည်လုံးဝရင်းသင့်လျှင်သင်ရုံသင်ချင်အရပ်၌ငါထိုင်နှင့်အရှုပ်ပယ်တနေ့လုံး၊ယခုရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပြုအတိအကျကြောင်း–အမည်မစီရင်။ ယခုတော့:ပြောကြရအောင်နည်းနည်းပိုပြီးအဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်အတွေ့အကြုံအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်း။
အလွန်စချင်သောသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအနိုင်ကစားအပေါ်မည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်၊ထို့အပြင်၊ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှ။ အဘယ်ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကဖန်ဆင်းတော်မူပြီခေါင်းစဉ်အလုပ်လုပ်သောဖြောင့်ချွတ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်တိုင်းအတွက်-ကလူသတ်သမားတွေ၊သေချာသည်! ဒါကြောင့်ကြည့်၊အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသင်ပေါ်မှာဆိုရင်တစ်ခုခုင့်မည်သည့်အဓိကအထဲမှသင်ဖွယ်ရှိရှိသည်လိမ့်မယ်ရးကုန်တင်တက် Mozzoloh။ ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များတရားဝင်ထောက်ခံမှုအတွက် Chrome၊မြေခွေး၊ရှုနှင့်အော်၊သို့သော်အများစုမှာအခြားဘြတ္ကံအလုပ်ရုံဒဏ်ငွေ။, အားလုံးကျနော်တို့အထဲကထောက်ပြအကြောင်းကျွန်တော်အာမမခံနိုင်ပါ၎င်းတို့၏သဟဇာတအတိုင္းနောက်ပိုင်းတွင်လမ်းဆင်း–အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့ချင်ကြပါဘူးအ fellas အခါသူတို့ကချွတ် jerking အားတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်း၊မှန်သော? တစျခုကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂၤါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂိမ်း၏ကယ်တင်ဖိုင်များကိုတွေကိုတပြိုင်တည်းအနှံ့အားလုံးအတူတူထုတ်ကုန်၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်အမှန်တကယ်ထဲသို့ဝင်တူညီသောအကောင့်။ အဲတစ်ခုလုံးကိုအမှတ်ရှိခြင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်-သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာမှလုပ်နှင့်သင်နေဆဲတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း XXX ဂိမ်း။ အလွန်ကြီးစွာသောဘယ်လိုခေတ်မီညမ်းဂိမ်းထုတ်လုပ်ရေးဒီယို၊အလုပ်၊မှန်သော?, အားလုံးအလုပ်ကြိုးစားပြုနိုင်ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ပေါ်ရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ဂိမ္း–ချိုမြိန်!
မှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်၊သင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်အညီအောင်မြင်မှုများအတွက်အသင့်ရဲ့နူးဘားတန်းသင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှိပါတယ် ၁၈၂ မှာလက်ရှိအချိန်တွင်အချိန်အတွက်၊ပိုပြီးနှင့်အတူစီစဉ်ထားသည့်နောက်ထပ်ဆင်းခြေရာခံ။ အဲဒီတစ်ခုချင်းစီအောင်မြင်မှုများကိုအမြဲသော့တစ်မူထူးခြားသောအနုပညာလက်ရာများထားရာအမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လိင်–သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သင်လိုချင်တာအခါတိုင်း။ အဲဒီအပြင်ညစ်ညမ်းပြခန်း၊သင်တို့သည်လည်းရနိုင်အနည်းငယ်သောစားနပ်ရိက္ခာသင်ကူညီသင့်ရဲ့ရှာပုံတော်ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံး။ ဒီကိရိယာဆက်နွယ်နေသောသင့်အကောင့်မှအမြဲတမ်းနိုင်ဖြစ်ပြောဆိုထားသည်နောက်တဖန်မကျော်နှင့်။, ဥပမာအ+၁%အခွင့်အလမ်းသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းအရေးပါသည့်သပိတ်မှောက်ခုန်နှုန်း၊တစ် ၅၀ တြကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စွမ်းရည်ပင်မှဝင်ရောက်ခွင့်သီးသန့်ဒေသများအကြောင်းသင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအတွင်းမဟုတ်လျှင်သင်ဖြည့်စွက်သက်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု။ အကျယ်အောင်မြင်မှု(အရာသာလူ ၁၂)အတူသင်တို့ပေးလိမ့်မည်အထူးအခက်-ည့္ခဗားရှင်း Mozzoloh ကြောင်း dials အရာအားလုံးကိုအထိအရူးအခက်အခဲနှင့်သင်ဖွယ်ရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ်သူမျှမမှစီမံခန့်ခွဲပြီးဒီအခက်-ည့္ခကိုယ့်သေး–ထင်တယ်ဘာကြာလဲ? ထုတ်ကြိုးစားနှင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဝေးမသွားအောင််ရှေ့တော်!
ဟိုရှုထောင့်နှင့်ဓာတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်၊တိုက်ခိုက်ရေးတော့လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူးနေသူတစ်စုံတစ်ယောက်အသုံးပြုမယ့်အရပ်၌ရှိကြသောအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ရ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့များကိုပင်မပါဘဲအပြာဓာတ်မယ်လို့နေဆဲဖြစ်စိတ်ကူးတစ်ခုနှင့်ပျော်စရာခေါင်းစဉ်ကိုကစားရန်ကြောင့်အားလုံး၏အကြီးတိုက်ပွဲအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ ဒါဟာရိုးရိုးသားသားအတော်လေးအဆင့်မြင့်လို့အံ့သြသွားလျှင်အနည်းငယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ကိုယ့္အေျနယ်ပယ်အတွက်လွန်းမဝေးအနာဂတ်–ဘယ်လောက်ကြီးကျွန်မတို့မှာအတူတူတင်ထားသည့် XXX ဂိမ်း!, ယခု၊ရှိပါတယ် ၉၃ လက်နက်များကနေရွေးချယ်ဖို့၊ရာပေါင်းများစွာများအဆင့်မြှင့်လမ်း၊၂၈ ထူးခြားတဲ့ဦးထုပ်နှင့်နီးစပ် ၂၀ တက်ကြွစွာစာလုံးပေါင်းကြောင်းဖို့အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါတယ်သင်အထောက်အကူ။ ဒီနေနဲ့စွန့်စားမှုဂိမ်းအကြောင်း၊လူအများကြီးဖို့သွားကစားလို့ေပ်ာ္စရာေကာင္း–အပြာဓာတ်အသုံးျဒုတိယ!
ကျွန်တော်သိသည်အလွန်စတင်ချိန်မှစသောဂရပ်ဖစ်ဟာအလွန်အရေးကြီးသောသည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့အောင်မြင်မှုပြခန်းစုံကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်အကြီးမြတ်ဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်အပိုင်းပိုင်းပြန်လိင်ကျွန်မတို့ဟာအစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးလာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးတာဝန်ကြီးကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဲဒါကိုအဟုန်ကိုမုန်တိုင်းတိုက်သဖြင့်ကမ္ဘာကြီး–ကျွန်တော်တော်တော်သေချာနေတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ချစ်ချင်ပါတယ်၊သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ကျနော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပြီးအနည်းငယ်ရှိသည့်အသိုင်းအင်္ဂါကူညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလို့ရပျေါမှာတိုးတက်စေ။ အဖက်ဆာဗာကတော်တော်လေးတက်ကြွနှင့်အတူ ၈၀၀၀ေက်ာ္တြင္အဖွဲ့ဝင်များ၊အပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်များခံယူ ၃၀ ပို့စ်များကိုနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာနှင့်အတူဆက်စပ်။, ကျနော်တို့နေဆဲကြီးထွားလာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်အဖြစ်ပိုပြီးအကြောင်းထေးဖြန့်ချိ၊Mozzoloh ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးညမ်းပုံစံရှိကြသည်။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်သင်ရှိသည်ဖို့ယူအဘယ်သို့ပြုရန်အားကြီးသောသားရဲနှင့်ပြင်းရန်သူတို့ကိုသင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်? ရှိမယ့်တစ်ဦးလွယ်ကူသောလမ်းထွက်ရှာမည်:ဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ကစားရန်ရာက္ဇာညမ်းဂိမ်းထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်လာမယ့်အဘို့တလျှောက်ကျေးဇူးပြုပြီး–ရှိအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှုကစား Mozzoloh–ၿငိမ္းခ်မ္းေရး!